Chii chinonzi Intent Analysis uye Inogona Kushandiswa Sei? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
chakagadzirwa Intelligence, Machine Learning, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Chii chinonzi Chinangwa Kuongorora uye Chingashandiswa Sei?
Vanhu vazhinji havazive izwi rekuti Chinangwa Ongororo asi ndine chokwadi chekuti vanofanira kunge vakanzwa nezvazvo. Izwi iri rakakosha chaizvo kune a bhizimisi maonero uye iri huru kushandisa. Ichi chinyorwa chichakubatsira iwe kuti udzidze kuti chii chaizvo Intent ongororo? Uye ndezvipi zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa pakuongorora uku? Zvakare, icharatidza kuzadzikiswa kunoenderana nezvinodiwa zvekushambadzira kana zvimwe bhizimisi.
Chii Chaicho Chinangwa Chekuongorora?
Kuongorora Kunangwa kunobva kuIntent (ion) Kuongorora. Kazhinji, izwi iri ndere kubvuma zvinangwa kubva murugwaro. Iyo inogona kuve chinangwa chakagadzirirwa kutora chero chinangwa. Chinangwa chinoreva chinangwa chekutengesa, kana chinangwa chekunyunyuta kana chinangwa chekutenga nezvimwewo Pane chikonzero chekunzwisisa izvo zvinangwa zviri kumashure kwechinyorwa uye chiitiko chacho. Inogona kutungamira kune akawanda mabhenefiti kune iyo kambani kana vatengi. Izvo zvinogona zvakare kutibatsira kuti tinzwisise mhinduro kubva kune vatengi nezve chero zvigadzirwa, kana isu zvakare tinogona kunzwisisa iyo mhando yebasa iyo yatinofanira kupa kana kuvandudza. Kana isu tikataura nezve izvo zvigadzirwa uye masevhisi ekuvandudza, iyo chinangwa kuongorora inokupa iwe yepamusoro ruoko.
Kufarira chakagadzirwa Intelligence? Dhawunirodha gwara redu pane zvazvino kuitika uye mashandisiro.
Pane Pane Chinodiwa Chekuongorora Kuongorora?
Zvechokwadi, pane kudiwa kwepakutanga chinangwa chekuongorora. Tinofanira kunzwisisa tobva taita zvinoenderana nechinyorwa nezviito. Izvi zvinogona kunyatsotsanangurwa nemuenzaniso. Ngatifungei kuti iwe ndiwe mupi wechero zvigadzirwa kana masevhisi kune vatengi. Sezvo a bhizimisi muridzi, munhu wese anoda mhinduro yechokwadi kubva kune vatengi kuti chigadzirwa chavo nemasevhisi awedzere kukosha uye kuvandudza zvinoenderana. Kana mhinduro yakapihwa nevatengi kana vatengi vako ikasanzwisiswa nemazvo, ungakwanise kuita zvinoenderana here? Saka Kuongorora kwechinangwa kuchaita basa guru pano. Zvichakubatsira iwe bhizimisi kuti unzwisise zviri kuedza kutaura nemutengi wako nekukupa mhinduro. Ndedzipi vavariro dzemhinduro iyoyo? Pane chido chekuongorora chinangwa mumasaiti evanhu, kushambadzira kana bhizimisi nzvimbo.
Kuongorora kwekufunga kunogona kuitwawo pasina kuve nekuongororwa kwemavara. Sezvo hunhu hungaratidzawo chinangwa. Nezve chirevo, ngatifungei kuti vatengi vanofanira kutenga chigadzirwa online. Anoshanyira mamwe masayiti akadai seFlipkart kana Snapdeal. Yakaratidza kuti mutengi ane chinangwa chekutenga chimwe chinhu ingave iri foni, bhegi kana chero chinhu. Pasina chero kuongororwa kwemavara kwakabatanidzwa, yakaratidza varidzi veFlipkart kana veSnapdeal, kuti vatengi vakaratidza chinangwa chake chekutenga icho chigadzirwa. Kwete chete iwe unogona kunzwisisa zvinangwa kubva muchinyorwa asi iwe unogona zvakare kunzwisisa izvo zvinangwa kubva pane zvavanoita. Chinangwa Kuongorora kunogona kuve kungwara chiito kuverenga vashandisi pfungwa.
Zvishandiso zveChinangwa Kuongorora:
Iko kunyorera kwekuongorora kwechinangwa kunogona kuonekwa mumabasa akasiyana siyana. Isu tichapa ipfupi ruzivo kupi uye sei iyo chinangwa chekuongorora chinoshandiswa.
1. Kubata Kwevatengi:
Kubata kwevatengi ndicho chiitiko chakajairika umo iwe uchaona basa rekuongorora kwechinangwa. Mune izvi, zvinangwa zvevatengi zvinonzwisiswa. Kune akati wandei zvinangwa izvo mutengi anogona kuratidza nezve chigadzirwa kana masevhisi ako bhizimisi. Zvinobatsira chaizvo kuziva zvinangwa zvemhinduro yemutengi. Zvinangwa zvevatengi zvinogona kuve mubvunzo, zano, kunyunyuta. Tichishandisa chinangwa chekuongorora tinogona kuziva zvinangwa zvevatengi uye tozogadzirisa zvinoenderana. Semuyenzaniso, “Murairo wandakagamuchira wakanga usina kupera”, uku kunyunyuta kukuru uye “Odha yagamuchirwa yakanga yakasiyana neyandakarayira”, nokudaro chinangwa ichi chinoratidza chichemo chakakomba zvikuru. Uchishandisa chinangwa chekuongorora iwe unogona kuisa pamberi kugadzirisa mubvunzo iwo wakanyanya kuoma.
2. Kushambadzira kuburikidza neSocial Posts:
Kune akasiyana masocial network masosi ayo vashandisi vazhinji vanogovana zvavo ruzivo rwavo nezve zvigadzirwa kana masevhisi. Uchishandisa chinangwa kuongorora, unogona kusarudza imwe nzvimbo yakakwana kuratidza kushambadza kwako kune vatengi. Semuenzaniso, ngatifungei kuti pane akati wandei magariro anotaridza zvinangwa zvakasiyana zvefoni.
"Hupenyu hwebhatiri hwefoni iyi hauna kunaka", inova mhinduro.
"Ingadai yakashandisa 12 MP kamera panzvimbo ye8 MP", iri zano.
"Ine sensor yeminwe here?" unova mubvunzo.
"Unoda foni iri nani pane yako yekupedzisira? ” kunova kushambadza
Iwe unogona nyore kuona iyo pateni yezvinangwa. Kana iwe ukaona mhedzisiro yechinangwa chekuongorora chichemo saka unogona kuratidza kushambadza kwako uko kuri kupa zvirinani zvirinani kupfuura iyo foni yakataurwa nevatengi.
3. Kuonekwa kweSpam:
Zvakare, nerubatsiro rwekuongorora kwechinangwa, unogona kuona zvinangwa zvechero zvinyorwa kana maemail aunogashira. Inogona zvakare kubatsira mukutsvaga kwe spam senge zvisiri izvo maemail, mafoni kana mameseji. Nerubatsiro rwechinangwa chekuongorora, maemail, kufona kana mameseji anoongororwa kuti aone kana chinongedzo chakabatanidzwa kana URL iri mazviri zvakabatana kune zvitupa zviri pamutemo kana kwete. Semuenzaniso cherudzi urwu rwechinangwa phishing maemail kana mameseji. Iyo URL inonyatso kuenzaniswa ichipesana neiyo Databases kudzivisa kubiridzira phishing. Zvakaoma kuti spammer avanze kuzivikanwa kwavo kubva kuchinangwa chekuongorora icho chinoshandisa kugona kwekutumira tsamba.
Inogonawo kushandiswa mukushambadzira kwezvinhu zvako. Kana mushandisi aratidza chinangwa chake chekutenga chero chinhu kubva kune yako saiti. Iwe unogona kushandisa iyo ongororo uye kuratidza yakakodzera zvigadzirwa kushambadzira kune iye mushandisi kunyangwe mushandisi uyu asiya yako Website. Chiitiko ichi chinozivikanwa seretargeting. Kunge Amazon uye Flipkart, vanoshandisa Facebook kutaura nevashandisi nekuvaratidza kushambadza kwezvigadzirwa zvavo izvo zvinogona kubata kufarira kwemushandisi akamboshanyira. Mhedzisiro yekuongorora inogona kubatsira zvakanyanya kune yako bhizimisi kupa zvimwe akakodzera zvigadzirwa uye masevhisi kune mutengi ari kunyatsofarira.
Kutsvaga mhinduro ine hungwaru yako bhizimisi? Taura nekutaurirana.
Yepamusoro Tech Unyanzvi hweInotevera Chizvarwa cheMabasa
Feb 24 | Human Resources, Technology Kugadzira, zvigadzirwa zvetekinoroji
The Machine Kudzidza Ramangwana Ratosvika: Sei AI Kukanganisa Ese Industries
Feb 14 | chakagadzirwa Intelligence, Digital Nokuchinja, Machine Learning
Iyo inonyanya kukosha AI Bhizinesi Zvikumbiro zve2022
Jan 19 | chakagadzirwa Intelligence